Dad ay xukuumada Itoobiya xabsiyada u taxabtay.
Xukuumda Itoobiya oo ku guulaysatay iska horkeenka Qoomiyadaha Ogadeenya iyo Oromiya.
Madaxwaynaha Soomaaliya oo ku dhawaaqay Ra`iisal wasaarihii Soomaaliya.
EPRDF oo sheegtay inay oggolaatay sharciga doorashada
Madaxweyne Bush oo ku kuulaystay mar kale doorashadii madaxwaynanimada ee Maraykanka.
Barnaamujkii kororso aqoontaada oo aan caawa ku soo qaadan doono gargaarka dag daga ah iyo suugaan halgameed.
Dabayaaqadii Bishii hore ee Oktoobar ayaa Xabsiga loo taxaabay qaar ka mid ah shaqaalaha maamulka maqaar saarka ah ee magaalada Fiiq. Dadkaas oo ilaa iyo hada aan la sheegin sababta xabsiyada loogu guray ayaa waxaa ka mid ah Maamulihii Dugsiga sare ee magaalada Fiiq Deeq Cumar cali, Saxardiid Muxumed Cali oo ka mid ahaa shaqaalah maamulka gobolka Nogbeed iyo weliba Xasan Sh Qaasim oo ka mid ah gudiga maamulka dagmada Fiiq.
In kasta oo uusan Taliska Adis Ababa wax faah faahin ah ka soo saarin xabsiga dhibanayaashan hadana dadka deegaanka ayaa noo sheegay in ay aaminsan yihiin in lagu eedeeyn doono dhibanayaashaas musuq maasuq, amaba in ay taageeraan ciidamada Jabhada wadaniga xoreynta Ogadenya ee taliska Itoobiya dagaalka kula jira, taas oo bay dheheen caado u ah ciidamada Itoobiya in ay ku eedeeyaan cid kasta oo ay xabsiga u taxaabaan.
Dhinaca kalana waxaa 26.10.2004 xabsiga magaalada Jig-Jiga toogasho lagu dhaawacay maxbuuska lagu magacaabo Tasfaaye Mulugeeta. Dhaawaca maxbuuskan ayaa waxuu ka danbeeyay cabasho ay maxaabiista xabsiga dhexe ee magaalada Jig-Jiga ka muujiyeen dhinacyada Nolasha aas aasiga ah, sida Cuntada, Caafimaadka, Nadaafada iyo guud ahaanba waxyaabaha nolasha ruuxa lagama maar maanka u ah oo aan ka jirin xabsigaas gudihiisa.
Dhibane Tasfaaye oo ay ku yaalaan laba xabadood oo uu ku dhuftay sida la sheegay taliyaha xabsigaas Cabdi Siyaad ayaa daaweeyn loo geeyay Isbitaalka Kaaraamardha ee magaalada jig jiga, waxaana la sheegayaa in ay xaaladiisu ka sii darayso. Sidoo kale waxaa la sheegayaa in maxaabiis badan oo xabsigaas ku jiray loo gaystay Jidh dil aad u daran oo dhaawacyo gaadhsiiyay.
Xukuumada dhiigyacabka ah ee gumaysiga Itoobiya ayaa ku guulaysatay iska horkeenka qoomiyadaha walaalaha ah ee Oromiya iyo Ogaadeenya, kadib markay 24.10.2004 deegaamada labada Qoomiyadood ka abaabushay wax ay ku tilmaantay doorasho labada maamul lagu kala qaybinayo.
Dadka ka soo jeeda Labadaas Qoomiyadood ayaa xukuumada Itoobiya kala soo hor jeeda dagaal ay kaga doonayaan madax banaanidooda, sidaas daraadeed ayay xukuumada Itoobiya u abaabushay doorasho ay qoomiyadahaas walaalaha ah isaga hor keenayso.
Taliska Adis Ababa isaga oo ka duulaya qawaaniinta Xukuumadaha gumaysiga ee qaybi oo xukun ayuu soo abaabulay doorashooyin aan cadaalad ahayn oo uu iskaga hor keenayo shacabka walaalaha ah ee deegaanka iyo dhaqankuba ka dhaxeeyo.
Rabshado ka abuurmay doorashooyinkaas oo keenay dhimasho iyo dhaawacba ayay dadku ku tilmaameen mid ujeedo gumaysi laga lahaa, isla markaana lagu minjaxaabinayay wada jirka iyo isfahanka qoomiyadahaas.
Madaxweynaha DFKMG ah ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa u magacaabay Ra'iisal Wasaaraha DFKMG ah ee Soomaaliya Professer Cali Maxamed Geeddi oo 03.11.04 loo dhaariyey xilka xubinimada baarlamaanka ka dib markii uu uga tanaasuley Maxamed Cumar Xabeeb (Maxamed Dheere).
Munaasabada magacaabista ayaa waxa goob joog ka ahaa Guddoomiyaha baarlamaanka FKMG ah ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan, Wasiirka xiriirka iyo iskaashiga gobolka bariga Afrika ee dalka Kenya John Arap Koech ,diplomaasiyiin iyo weliba xubno ka tirsan urur goboleedka IGAD.
Magacaabista Ra'iisal Wasaaraha oo in muddo ahba la sugayey ayaa waxay ka danbeysey ka dib markii labo qodob oo beryahaan la isku khilaafsanaa wax ka bedelistooda iyo iswaafajintooda darraad xildhibaanadu ansixiyeen inaan waxba laga bedelin ee sidooda loo qaato ,taasoo qodobka 47aad ee Axdiga KMG ah uu qorayo in Ra'iisal Wasaaruhu uu noqdo mudane ka tirsan xubnaha baarlamaanka.
Madaxweynaha ayaa ka dib magacaabistiisii waxa uu ka codsaday Ra'iisal Wasaare Professer Geeddi inuu sida dastuurku qorayo ku soo dhiso muddo bil gudaheed ah golihii wasiirada oo xildhibaanada dhexdooda uu ka soo magacaabo,taasoo Ra'iisal wasaaruhu aqbalay xilka loo dhiibay iyo waqtiga loo qabtay inuu ku soo dhiso xukuumaddaba,tan ayaa waxay noqonaysaa tallaabo kale oo xaga hore loo qaaday ,iyadoo markaan ka dib loo fadhiyo magacaabista Ra'iisal Wasaare ku xigeenada ,Wasiirada iyo Wasiiro ku xigeenada DFKMG ah ee Soomaaliya.
Ururka ku amar-taagleeya talada xukuumadda Addis Ababa ee EPRDF ayaa sheegay inuu oggolaaday inta badan qodobbada sharciga doorashada ee ay soo jeediyeen xisbiyada mucaaradka ah.
Ururka EPRDF wuxuu talaadadii la kulmay ururka mucaaradka ah ee UEDF, kaasoo uu kala hadlay sharciga cusub ee qeexaya qaabka ay doorashooyinku u dhacayaan, wuxuuna sheegay inuu aqbalay badi arrimihii ay mucaaradku soo jeediyeen. Ururka EPRDF wuxuu ku gacan saydhay labo qodob oo ka mid ah sharcigan ay mucaaradku soo bandhigeen. Arrimaha uu Ururka EPRDF diiday waxaa ka mid ah in xafiiska doorashooyinka ee hadda jira lagu beddalo guddi doorasho oo xisbiyada dalka oo dhami ay xubno ka yihiin, taas oo la aanteed ayna suura galayn doorasho ay xisbiyadu ku dhiiran karaan oo ka dhacda wadanka Itoobiya.
Ururka EPRDF wuxuu daboolka ka qaaday inuu wax wada-xaajood ah arrimaha doorashada kala galaynin xisbiyada oo uu ku tilmaamay inay dagaal wax ku doonayaan.
Ururka EPRDF wuxuu intii hadda ka horraysay oo dhan diidanaa in lagu soo farageliyo sharciga doorashooyinka ee uu isagu sameeyay, kaasoo xisbiyada intooda badan ay sheegeen inuu isagu ku danaysanayo. Heshiiskan uu hadda la galay xisbiga UEDF-na wuxuu u muuqdaa mid uu xisbiyada mucaaradka ah ku kala jabinayo, si ay ugu suuragasho doorashada dhalnateedka ah ee uu doonayo inuu ra�yul caamka ku khaldo.
Madaxweynaha wadanka Maraykanka oo xalay khudbad dheer kasoo jeediyey xarunta Xisbiga Jamguuriga ee layidhaahdo The Reaggen House ayaa si weyn ugu mahadnaqay shacabka Maraykanka oo uu sheegay in ay si buuxda ugu doorteen in uu noqdo Madaxweynaha 4ta sano ee soo socota.
Madaxweynaha ayaa ku sheegay ninkii la tartamayey ee la odhan jiray Senator Kerry nin wanaagsan oo siyaasi ruugcadaa ah, isla markaana ugu mahadnaqay tartankii kululaa ee uu la galay.
Madaxweyne Bush ayaa ka codsaday dhamaan Shacabka Maraykanka weliba gaar ahaan kuwii codkooda siiyey Senator Kerry in ay la shaqeeyaan asagoo markaa carabka ku dhuftay in uu dadaal dheeraad ah u geli doono sidii uu kusoo jiidan lahaa taageeradooda.
Mr.Bush ayaa ku nuux nuuxsaday inay kasoo gudbeen shacabka Maraykanka dagaal, dhaqaalo xumo iyo argagax lala beegsaday asagoo markaa sheegay in ay Maraykanka iska difaaceen isla markaana burburiyeen wixii cadowga ahaa.
Bush ayaa intaa ku daray in dalka Maraykanku uu hada galay marxalad cusub oo dhiiri gelin leh asagoo sheegay in uu wax badan ka qaban doono arrimaha Bulshada ee dalka Maraykanka.
Madaxweyne Bush ayaa illaa iyo intii uu ku dhawaaqay guusha hambalyooyin ka helay Madaxda caalamka oo taleefoono iyo qoraalo usoo diray.
Madaxda waddamada Yurub ayaa u hambalyeey guusha uu gaaray Bush balse ku nuux nuuxsaday in loo baahan yahay in la xoojiyo xiriirka ka dhaxeeya labada dhinac.
Waxaa ayaguna si weyn ugu riyaaqay guushaas asxaabta Mr.Bush gaar ahaan Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska, ka Austareeliya, Madaxweynaha Filibiin iyo xubnihii kale ee ka midka ahaa Isbaheysiga la dagaalka wadanka Ciraaq.
Madaxda waddamada Carabta iyo Muslimka ayaa ayaguna hambalyo u diray Bush balse waxaa jira cabsi ay qabaan qaar kamid ah waddamada Carabta sida Siiriya iyo waliba waddanka Iraan oo doorashada Bush u arka mid siisay Bush taageero inuu ku dhaqaaqo siyaasadiisa ku aadan waddamadaas.